Ndipei zororo yakavambwa mu2017 nechinangwa chekuunza iyo ongororo uye nhau dzichangoburwa dzeiyo firimu nyika kuvashandisi vedu veInternet. Pano iwe unowana yakawanda nhamba yezvinyorwa nezve mafirimu ezvese zvidzidzo, pamwe nenyika yemimhanzi. Kubva nhoroondo yemimhanzi, mutero wemimhanzi, uchienda kuburikidza nenhau dzichangoburwa kubva kumapoka akakodzera enguva yedu uye apfuura.
Zvese izvi zvinyorwa zvakagadzirwa neyedu inoshamisa timu yevanyori, iyo iwe yaunogona kuona pazasi. Kana iwe uchida kujoina navo unogona kutibata nesu kuburikidza inotevera fomu. Kana, kune rimwe divi, iwe uchida kuona iro rese runyorwa rwemisoro yakafukidzwa pane saiti uye yakarongedzwa nezvikamu, iwe unogona kushanyira peji ino.
Ndinoda mafirimu nemumhanzi. Ini ndinogara ndakatarisa kuburitswa kutsva, kungave kuri paInternet, magazini, ... chero chii! Imwe yemarongero angu akanakisa ndeyekupedza masikati anehusimbe newaunoda ... Ndiyo yakanakisa. Uye ndinofarirawo kunyora nekugovana zvese zvandinogona nezve zviri kuitika munyika yevaraidzo.